‘तिमीले पहिला कसैसँग सेक्स गरेकी छौं ?’ उसले सुम्सुम्याउँदै सोध्यो। मैले यथार्थ जवाफ दिएँ, ‘छैन’। … नेपाली सत्य यौनकथा | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
सेक्सको बदलामा जागिरको प्रस्ताव स्वीकारेपछि मलाई आफू बेचिएको अनुभूति भयो। सुपरभाइजरको काखमा थिएँ म। उसले गालामा चुम्बन गर्‍यो अनि ओठ चुस्यो। बियर पिएका कारण उसको मुख गन्हाएको थियो । म छट्पटाउन थालेँ। उसको मुखलाई आफ्नोबाट हटाउने प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकिन। शरिरमा एक प्रकारको तरङ्ग उठिरहेको थियो भने मनमा डर।
‘तिमीले पहिला कसैसँग सेक्स गरेकी छौं ?’ उसले सुम्सुम्याउँदै सोध्यो। मैले यथार्थ जवाफ दिएँ, ‘छैन’। ‘वाह!, यसको मतलव तिमी भर्जिन छौ, त्यसो भए झन् मज्जा आउने भयो,’ उसमा खुशी देखियो। मैले उसको खुशी बुझ्न सकेकी थिइन। आफूलाई डरले सताइरहँदा उसको खुशीले कुनै प्रभाव पारेन। ‘आउ, अब सुरु गरौं।’ आफ्ना कपडा फुकाल्दै उसले भन्यो।
शरिरमा एउटा पेन्टीबाहेक उसले केही बाँकी राखेन। अनि मेरो कपडा खोल्न हात बढायो। निकै असजिलो महसुस भइरहेको थियो। आफ्नो बहिनीको अगाडी समेत कपडा फुकाल्न असजिलो हुन्थ्यो, अहिले त परपुरुषको सामुन्ने नाङ्गिनु पर्दै थियो। मेरो टिसर्ट र पाइन्ट खोलेर उसले सम्पूण शरिर नियाल्न थाल्यो। अनि अचानक मेरा स्तनमा हात ल्याए। झसङ्ग भएँ ।
हल्का हातले स्तन सुम्सुम्याउँदै उसले भन्यो, ‘कति पोटिला रहेछन्।’ दाहिने हातले मेरो देब्रे स्तन दबाउँदै उसले मेरो ओठ चुस्यो। मेरो तल्लो ओठलाई उसले आफ्नो मुखभित्र यसरी हुलेको थियो कि मैले फुत्काउन निकै कसरत गर्नुपर्‍यो। म अलिक पर हटेँ । तर उ म तिरै आयो। अनि मेरो ब्रा खोलिदियो। मेरालागि यी हरकतहरु बिल्कुलै नयाँ थिए।
एकपछि अर्को गर्दै मैले नयाँ-नयाँ अनुभव गरिरहेकी थिएँ। तैपनि मेरो मनबाट डर हटिसकेको छैन। यस्तो कार्य कतिबेलासम्म जारी रहने हो, कुन बिन्दुमा पुगेर टुङ्गिने हो, मलाई केही पत्तो थिएन। मेरो शरिरको माथिल्लो भाग नाङ्गिसकेको थियो। उसले आफ्नो दुवै हात मेरा दुवै स्तनमा ल्यायो। अनि सम्भवतः स्तनको आकार नाप्दै थियो। मेरो जिउ सिरिङ्ग भयो। मैले उसको हात हटाएँ। ‘के भयो ?’ उसले भन्यो । मैले जवाफ दिएँ, ‘अप्ठ्यारो लागिरहेको छ।’ मलाई ढाडस दिदैं उसले भन्यो, ‘सुरुसुरुमा यस्तै हुन्छ, तर पछि मज्जा आउँछ।’ यति भनेर उसले मेरो दाहिने स्तन चुस्यो।
मैले आफ्नो हातले उसको टाउको माथि उठाउन खोजेँ तर उसले मेरा हात समातेर मलाई निरीह बनायो। अनि आफुखुशी मेरा स्तन चुसिरह्यो। केहीबेरमै मेरो शरिरमा पसिनाको बाढी आयो। मलाई काउकुती लागेजस्तो भइरहेको थियो। तर पनि आफ्नो शरिरको चाहना अनुसार बिश्राम र राहत पाउन सकिरहेकी थिइनँ। उसले स्तनको मुन्टोलाई ओठमा च्याप्प चेप्यो। अनि जिब्रोले खेलाउन थाल्यो। अर्को स्तनमा उसले आफ्नो हात राखिरहेको थियो। उसको स्पर्शले स्तन निकै रन्किन थालेको अनुभव गरेँ। म भित्र उत्पन्न छट्पटी, उकुसमुकुस सहिनसक्नु हुँदै थियो।
‘कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई ?’ उसले सोध्यो। ‘डर लागेको छ,’ मैले छोटो जवाफ फर्काएँ। ‘नडराउ, केही हुँदैन,’ उसले मलाई सान्त्वना दियो। तर पनि मभित्रको डर कायमै थियो। पुरुषसँगको पहिलो स्पर्शले मलाई हतास र भयभित तुल्याइरहेको थियो। बेलाबखत म त्यो क्रिडाबाट उम्कन पनि खोज्थेँ। तर मेरो सामर्थ्य पुग्दैनथ्यो। म जति बल गर्थेँ, उसले उत्तिनै बल गरेर मलाई चेप्थ्यो। यो क्रम करिब २० मिनेट जारी रह्यो।
अनि जुरुक्क उठेर उसले मेरो पेन्टीमा हात ल्यायो। मलाई कुत्कुती लाग्यो। उसले पेन्टी बाहिरबाटै मेरा योनी सुम्सुम्यायो। मैले आफ्ना दुबै तिघ्रा जोडेर शरिर कसे। अनि योनीमाथि रहेको उसको हात हटाएँ। उसले मेरो पेन्टी खोलिदियो। अनि मैले आफ्नो हातले योनी छोपेँ, ‘नाइ मलाई डर लाग्छ ।’ मेरो कुरालाई उसले रत्तिभर महत्व दिएन। उसले मेरा हात हटाएर योनीलाई प्रत्यक्ष खेलायो। रौं सुम्सुम्याउने र योनीको डिलमा औंला रगड्ने गर्दै थियो उ। म भने डरले काम्न थालेँ। मेरो तिघ्रा काम्दै थियो। उसले चाल पाएछ र भन्यो, ‘साँच्चै डर लाग्यो कि क्या हो ?’ मैले भने, ‘हो, प्लीज मलाई छोडिदिनुस्, पछि गरौंला ।’ उ किन मान्थ्यो र? ‘केही हुँदैन भन्या, मेरो विश्वास गर न।’ उसले भन्यो। अनि योनीलाई बेस्सरी हातले माड्यो। मैले आफ्ना खुट्टा चलाएर उसलाई रोक्ने प्रयास गरेँ। अनि ऊ केही पछि हट्यो। ऊ पछि हट्दा मैले राहतको अनुभूति गरेँ। तर उसले त्यतिन्जेल आफ्नो पेन्टी खोलिसकेको थियो।
बाफ रे, यति लामो र यति मोटो अंग पुरुषको पेन्टीभित्र लुकेको होला भन्ने मैले कल्पनै गरेकी थिइनँ। मैले त त्यो अंग मुस्किलले हाम्रो बुढी औंला जत्रो होला भन्ने कल्पना गरेकी थिएँ तर मेरो कल्पना भन्दा निकै ठूलो पो हुँदो रहेछ। म झन् तर्सिएँ। केही बेरमै मैले त्यसको सामना गर्नुपर्ने भयले म झस्किएँ। मेरा मनमा यति कुरा नखेल्दै उसले मलाई पलङमा उत्तानो तुल्याइसकेको थियो।
‘नाई, मलाई छोडिदिनुस् प्लीज,’ मैले छुटकाराको अन्तिम प्रयासस्वरुप याचना गरेँ। तर उसले मेरा स्तन मुसार्दै भन्यो, ‘ओहो मेलिना.. कति डराएकी भन्या । केही हुँदैन, तिमी आफूलाई स्वतन्त्र छाड त।’ मलाई राम्ररी थाहापाइसकेकी थिए कि अब मेरो केही जोर चल्नेवाला छैन। मैले पहिलो पटक उसको अनुहारमा आँखा गाडे। यसअघि मैले उसको अनुहारमा यसरी आँखा गाड्ने हिम्मत नै गरेकी थिइनँ। उ मेरो शरिरमाथि लम्पसार पर्दै थियो। उसको लिङ्गले मेरो तिघ्रामा पहिलो स्पर्श गर्‍यो। म झसंग भएँ। लिंगको तापले मेरो शरीर सिरिङ्ग भयो। ऊ लमतन्न भएर मेरो शरिर माथि घोप्टियो। अनी मेरो ओठमा चुम्बन गर्‍यो ।
निकैबेर उसले मेरा ओठ चुस्यो अनि आफ्नो जिब्रोलाई मेरो मुखमा हुल्ने प्रयास गरिरहेको थियो। म भने बल गरेरै उसको जिब्रोलाई आफ्नो मुखभित्र पस्न नदिने प्रयासमा थिएँ। केहीबेरको घम्साघम्सीपछि मैले हार्नै पर्‍यो। उसले आफ्नो जिब्रोलाई मेरो जिब्रोमा दल्यो। म निकै छट्पटाएँ। तर पनि उसले आफ्नो कामलाई निरन्तर अघि बढाइरह्यो। अन्ततः मैले आफ्नो शरीर उसका सामू समर्पण नै गरेँ। उसले मेरो जिब्रोलाई आफ्नो मुखभित्र पसायो र चुस्यो। मेरो त सास नै रोकिएला जस्तो भयो। म उकुसमुकुस भइसकेकी थिएँ। अनि बल्ल उसले आफ्नो मुन्टो उठाएर मेरो अनुहार हुँदै स्तन र योनीतिर आँखा पुर्‍यायो।
त्यसपछि उसले आफ्नो लिंगलाई हत्केलामा लियो । ‘तिम्रो महिनावारी नियमित छ ?’ उसले मलाई सोध्यो । उसको प्रश्नले म चकित भएँ। आखिर यो प्रश्नको उद्देश्य के हो भन्ने नै मैले बुझिन। तर पनि मैले ‘छ’ भनेर जवाफ दिएँ । अनि उसले फेरि सोध्यो, ‘तिम्रो महिनावारी कहिले हुन्छ ?’ उसको दोस्रो प्रश्नले झनै मलाई चकित तुल्यायो । अनि मैले सोधेँ, ‘किन ?’ उसले भन्यो, ‘पहिला मेरो कुराको जवाफ देउ अनि भनौला ।’
मैले भने, ‘महिना पुग्न लागेको छ, दुइ तीन दिनमा हुन्छ होला।’ उसले आफ्नो छातीलाई मेरो स्तनमा टेकाउँदै भन्यो, ‘ल.. त्यसो भए झन् राम्रो भयो।’ उसको छातीले मेरा स्तनलाई थेप्च्याइरहेको थियो। मैले उसलाई केही माथि ठेल्दै सोधेँ, ‘किन र ?’ ‘महिनावारी हुने बेला भएको भए कन्डम लगाइरहन पर्दैन क्या, बच्चा हुने डर हुँदैन ।’
उसको जवाफ सुनेर म डराएँ । यतिन्जेलसम्म मेरो दिमागमा यस्तो कामबाट गर्भ रहन सक्छ भन्ने कुरा आएकै थिएन । तर उसको कुराले मलाई त्यो भयमा पनि धकेल्यो । अनायासै मेरो मुखबाट कुरा निस्कियो, ‘नाई बच्चा बस्यो भने म त बर्बाद हुन्छु ।’ उसले भन्यो, ‘महिनावारी भएको तीनसाता पछि खुला सेक्स गर्दा पनि बच्चा बस्दैन। तिम्रो त यो पहिलो पटक पनि हो, त्यसैले कन्डम लगाउँदा पाछ्न सक्छ, नलगाइकन गरेकै राम्रो हो।’ उ जुरुक्क उठेर आफ्नो पाइन्टको खल्तीबाट केही कुरा झिक्न थाल्यो र मतिर देखाउँदै भन्यो, ‘तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भने म कन्डम लगाउँछु तर मेरो विश्वास गर, नलगाइ गर्दा तिमीलाई सजिलो हुन्छ, बच्चा बस्दैन।’ मैले केही भन्न सकिनँ।
अघि नै मैले पलङमुनी देखेका चक्लेटका खोल भनेको त यही कन्डमको खोल पो रहेछ भन्ने लाग्यो। सायद यो कोठा यही कामका लागि प्रयोग हुँदैआएको रहेछ। ती बेलुन ठानिएका बस्तु चाँही कन्डम रहेछन् क्यार। मैले कन्डमलाई प्रत्यक्ष देखेकी थिइनँ। उसले मलाई फेरि सोध्यो, ‘के गर्ने भन..।’ मैले भने, ‘खै के गर्ने हो मलाई थाहा छैन, बच्चा बस्यो भनेचाँही म त बर्बाद हुन्छु ।’ ‘त्यो कुरामा तिमी धन्दै नमान,’ यति भन्दै उ ममाथि फेरि चढ्यो । अनि हातले लिङ्ग समातेर मेरो योनीमा अड्यायो। मेरो शरीर नै सिरिङ्ग भयो। थाहा छैन, अब मैले कस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हो।
उसको लिङ्गलाई योनीभित्र पस्न नदिनका लागि मैले बल गर्नमात्र के थालेकी थिएँ, उसले योनीभित्र हुल्न बल गरिहाल्यो। आफ्नो दाहिने हातको सहायताले उसले लिङ्गलाई योनीको मुखमा मिलाएर राख्यो र बिस्तारै भित्र ठेल्न थाल्यो। मैले चाहेर पनि उसको बलको प्रतिवाद गर्न सकिनँ। मैले बल गर्दा पनि त्यो भित्र छिर्नबाट रोकिएन। बिस्तारै भित्र छिर्दै गर्दा मलाई दुख्न थाल्यो र कराएँ, ‘नाइ ममी.. दुख्यो ।’ उसले लिङ्गलाई बाहिर निकाल्यो। ‘भयो, अब नगर्नुस्,’ मैले उसलाई भनेँ। तर उसले मेरो कुरा सुनेन।
अनि फेरि पूर्ववत् तरिकाले भित्र पसाउन खोज्यो। ‘ऐया, मरेँ’ छट्पटाउँदै मैले भनेँ। तर त्यतिन्जेल उसले आफ्नो लिङ्गको आधा भाग भित्र हुलिसकेको थियो। ऊ अझ बल गरेर भित्र ठेल्दै थियो। तर भित्र छिर्ने ठाउँ नै बाँकी नभएजसरी मलाई दुख्न थाल्यो। ‘यत्ति हो, यत्ति हो,’ मेरो मुखबाट आवाज निस्किएछ। ‘पुरै जान्छ, तिमी नआत्तिकन बस न,’ उसले भन्यो। अनि लिङ्गलाई भित्र-बाहिर गराउन थाल्यो। योनी त च्यातिएला जस्तै भइसकेको थियो। तर पनि उसले छोडेन। मेरा आँखाबाट पीडाको आँशु निस्कियो। जिउ कामिरहेको थियो। उसले मलाई अँगालोमा कसेर भएभरको बल लगाउँदै लिङ्गलाई भित्र-बाहिर गराइरह्यो।
मेरो मुखबाट पीडा प्रकट भइरहेको थियो, ‘ऐया..नाइ…दुख्यो….।’ उसले आफूलाई रोक्नै चाहेन। मलाई लाग्यो कि आज मेरो जीवनको अन्तिम दिन आइसकेको छ। सहनै नसक्ने भइसकेको थियो। उ लिङ्गलाई भित्र ठेल्थ्यो, अनि मेरो पिडा पनि बढ्थ्यो। तर जब उसले लिंग बाहिर निकालेजस्तो गर्दथ्यो, त्यतिबेला भने केही राहत पाएजस्तो लाग्थ्यो। निरन्तर यो क्रम चलिरह्यो। मेरो चित्कार पनि जारी नै थियो।
उसले आफ्नो गति केही बढायो। लिंग अझै पुरै पसिसकेको थिएन। पुरै नपसेसम्म उसले मलाई छोड्छ भन्ने पनि लागेन। अनि मनमनै भगवान गुहार्थे, ‘हे भगवान, एकपटक मलाई त्यो शक्ति देउ जसबाट म यो परिस्थती अन्त्य गर्न सकौं।’ उसको शरिरमा बल बढ्दै गएको र मेरो शरीरमा बल कम हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको थियो। उ यसरी मच्चिन थाल्यो कि लक्ष्य भेदन नगरी उसको वेग रोकिने कुनै संकेत नै मैले देखिनँ। तर म भने पीडाको उत्कर्षमा पुगेकी थिएँ। ‘ऐया..ऐया..ऐया.. ममी म मरेँ, सर मलाई छोड्दिनुस् भन्या.. दुख्यो।’ मेरा चित्कार झन बढ्दै थियो। तर उसले आफ्नो मुख मेरो मुखैमा जोड्यो। सायद ऊ मेरा आवाज रोक्न चाहिरहेको थियो। अनि एकै पटक जोडले ठेल्यो।
मलाई पीडा थप्दै उसको लिङ्ग पुरै धसियो। ‘अइया ममी….।’ म चिच्याएँ। ‘भयो भयो,’ उसले मलाई सान्त्वना दियो । एकैछिन उसले रोकेको आफ्नो गतिलाई फेरि निरन्तरता दिन थाल्यो। लिङ्गलाई केही तान्दै अनि ठेल्दै गरिरहेको थियो। दुखाइ बढ्दै थियो। ‘अझै भएन र ?’ आत्तिदै मैले सोधेँ। ‘अब एकै छिन हो, भइसक्यो,’ उसले भन्यो। एक हातले मेरा स्तन माड्दै उसले भित्र-बाहिर लिंगलाई दौडाइरहेको थियो। उसले त्यो गतिलाई अभूतपूर्व रुपमा बढ्यो। अनि मेरो मुखबाट ‘उँ..उँ…उँ..’ मात्र निस्किन थाल्यो। फुत्किन सक्छु कि भनी एकपटक बल गरेँ तर सक्ने कुनै छाँट देखिनँ ।
‘प्याट…प्याट..प्याट..’ आवाज निकाल्दै उसले पेलिरहेको थियो। उसका हरेक धक्कालाई मैले ‘ऐया..ऐया..ऐया..’ भन्दै सहिरहेकी थिएँ। करिब पाँच मिनेट यही क्रम जारी रह्यो। अनि एकाएक उसले निकै बल लगाएर लिङ्गलाई योनीभित्र धसायो। ‘उइ ममी…’ मेरो मुखबाट चित्कार निस्कनासाथ उ मेरो शरिरमाथि लमतन्न भएर ढ्ल्यो । मैले पनि त्यहीबीचमा केहीबेर आराम गरेँ। अनि उसलाई उठ्न आग्रह गरेँ। उसको त्यत्रो जिउलाई अरु थेग्ने सामर्थ्य मसँग समाप्त भइसकेको थियो।
केहीबेरपछि उ मेरो छेवैमा पल्टियो। धन्य बाँचियो जस्तो लाग्यो अनि योनी छामेँ। त्यहाँ त र्‍यालजस्तो चिल्लो पदार्थ पाएँ। अनि तन्नाको एक छेउमा आफ्नो हात पुछेँ। घिन पनि लाग्यो। पिडा पनि थियो। त्यसको बदलामा सायद मैले भोलिबाट जागिर पाउँदै थिएँ। मैले त्यो जागिर र आफूले भोगेको पीडालाई तुलना गरेँ अनि परिवारको अवस्थालाई पनि सम्झिएँ। मेरो शरीर पसिनाले निथ्रुक्कै भइरहेको थियो। मैले उसका शरीरमा कर्के नगर लगाएँ, शिथिल भएर पल्टिएको थियो। अनि म जुरुक्क उठेँ । उसले मलाई तान्यो, ‘किन हतार गरेकी ? एकछिन बस न सँगै उठौंला,’ आफ्नो छातीमा मलाइ घोप्ट्याउँदै भन्यो। मैले केही भन्नै नपाई उसले मलाई अँगालोमा कस्यो। मेरा स्तन नराम्ररी उसका छातीमा चेपिए । ‘म लुगा लगाउँछु,’ फुत्किन खोज्दै मैले भनेँ । ‘म पनि त लुगा लगाउँछु नि, यत्तिकै को बस्छ र ?’ उसले मेरा कपाल सुम्सुम्याउँदै भन्यो।
एकाएक उसले मेरा स्तन माड्न थाल्यो। अघिनैको उसको चुसाइले स्तनको मुन्टो पनि दुखिरहेको थियो, उसले माड्न थालेपछि झन् दुखाई बढ्यो। अर्कालाई दुखाएर उसलाई कस्तो आनन्द लागिरहेको होला भन्ने मैले बुझ्नै सकिरहेकी थिइनँ। अनि फेरि उ मेरा ओठ चुम्बन गर्न थाल्यो। यसपटक त उसले रिसले ओठ चुसेजस्तो गर्‍यो। साह्रै नै दुख्यो। चुस्दाचुस्दा रगत नै निकालुँ जस्तो पो गर्न थाल्यो। मैले प्रतिवाद गरेँ, ‘दुख्यो.. छोड्नुस् न ।’ म हात टेकेर उठ्न खोजेँ। मेरो एउटा हात उसको दुबै तिघ्राको बीचमा टेकिएछ । त्यहाँ उसको लिङ्गसँग स्पर्श भयो। मैले त्यतातिर नजर लगाउँदा लगाउँदै लिंङ्गले आफ्नो आकार बढायो। अनि तनक्क तन्कियो।
सायद उसको लिंगले मलाई जिस्क्याइरहेको थियो । मैले आफ्ना आँखा त्यहाँबाट अन्यत्र मोडे। उसले फेरि मलाई थेचार्‍यो। अनि उत्तानो पारेर ममाथि घेप्टियो। मैले उसको पुरै शरीरको भार बोक्नु परेको थियो। कम्मरलाई यताउता मर्काउँदै उसले आफ्नो लिङ्गलाई मेरो योनी वरपर दल्यो। त्यो निकै कडा भइसकेको थियो।
म अनिश्चितताको घेरामा परेँ, सायद उसले अघि कै गतिविधि दोहोर्‍याउने हो कि भन्ने डर लाग्यो। अघि त बल्ल तल्ल सामना गरेकी थिएँ, तत्कालै ममा त्यो परिदृष्य दोहोर्‍याउन सक्ने सामर्थ्य थिएन। ‘छोड्नुस् न ढिला भइसक्यो, घर जानुपर्छ,’ मैले उसलाई भनेँ। ‘म पुर्‍याइदिन्छु नि, किन चिन्ता मानेकी ?’ उसले भन्यो। त्यसपछि उ मेरो शरीरका विभिन्न अंगसँग खेल्न थाल्यो। स्तन मुसार्ने, चुस्ने, ओठ र जिब्रो चुस्ने, योनी मुसार्ने गरेर मलाई निकै बेर गिजोल्यो । उ योभन्दा अघि नबढ्ला भन्ने ठानेर मैले उसका सबैजसो गतिविधिलाई सहेरै बसेँ। तर ऊ अचानक आफ्नो लिङ्ग समातेर अघिकै जसरी योनीमा पसाउन थाल्यो। म हच्किए। ‘नाई… फेरि गर्न त म सक्दिनँ,’ मैले भनेँ। उसले भन्यो, ‘अघिको जस्तो अब त दुख्दैन, अब सजिलो हुन्छ ।’
यति भन्दैमा उसले लिङ्गको टुप्पो पसाइ हाल्यो। भगवानलाई सम्झदैं मैले आफ्ना आँखा बन्द गरेँ। दुख्न थालिहाल्यो। उ बेजोडसँग मच्चिरहेको थियो। यसपटक धेरै चिल्लो निस्किएछ क्यार, उसको पेलाईसँगै आवाज पनि आइरहेको थियो, ‘प्याच..प्याच..।’ तर दुखाइमा भने कमी थिएन । मेरो कम्मर भाँचिएला झैं भयो । मलाई योनी आफ्नो शरीरकै अङ्ग भएकामा पनि धिक्कार लाग्यो। किनकी त्यो मेरो इच्छा विपरित प्रयोग भइरहेको थियो। मेरो पिडामा सायद त्यसले अरुलाई आनन्द दिइरहेको थियो। सुस्तरी मेरा मुखबाट आवाज निस्किरहेको थियो, ‘ऐया…दुख्यो भन्या….भयो…मलाई छोड्दिनुस् ।’
उसले मेरो आग्रहलाई कहिले पो मानेको थियो र? आफ्नै सुरुमा ऊ मेरो योनी क्षतविक्षत पारौंला झैं गरी झम्टिरहृयो। उसका प्रहारलाई सहनुबाहेक मसँग अरु कुनै उपाय नै थिएन। मुखबाट पीडाका चित्कार पोखेरै भए पनि मैले उसका हरेक प्रहारलाई सहेँ। म कहिले खुट्टा तन्काउन खोजेर पीडा कम गर्न खोज्थेँ भने कहिले जिउलाई यताउता चलाउन खोज्थेँ। कहिले आफ्ना हातले उसले धकेल्थेँ। तर उसले मलाई यसरी कसेको थियो कि मेरा कुनै पनि प्रयास बेकार हुँदै गइरहेको थियो। अब त उसले मप्रति कुनै दयामाया नै राख्न छोडेको थियो। यति जोडले मेरो योनीमा लिङ्गलाई भित्रबाहिर दगुराइरहेको थियो कि भित्रको छाला नै पाछिए झैं लाग्यो। तर पनि उसको चित्त बुझिरहेको थिएन। उसको वेग बढ्दै गयो, अनि स्वाँ..स्वाँ पनि गर्न थालिसकेको थियो। तर पनि मच्चिन छोडेको थिएन।
उभित्रको त्यो शक्ति र प्यास देखेर म हैरान पनि भएँ र चकित पनि भइरहेकी थिएँ। मलाई जस्तो पीडा उसलाई किन भइरहेको छैन भन्ने कुराले पनि मलाई चकित तुल्यायो। यत्तिकैमा उसले ह्वात्त लिङ्गलाई भित्रै सम्म ठेल्यो। सायद मेरो नाइटोको भित्रपट्टी त्यसको टुप्पो पुगेको हुनुपर्छ। अनि लामो सास तान्दै उ ममाथि पल्टियो। उसको लिंग अझै योनीभित्रै सल्बलाइ रहेको थियो। त्यो सल्बलाहटले भने कता कता आनन्दको अनुभूति गरायो। यसरी मैले पहिलो पटक कसैलाई आफ्नो कौमार्यता सुम्पिए, फगत एउटा जागिर र परिवारप्रतिको दायित्वबोधले गर्दा । – मोरंग अनलाइन